Kọfị nwere ike ịbụ ndị kasị ewu ewu ume ọhụrụ na mbara ala. Kacha ọhụrụ na nnyocha na-ekpughe a ego ga-eleghị anya na-ụgha na ọtụtụ mba ndị ọzọ dị ka nke ọma na ihe karịrị 50% nke US bi na kọfị aṅụ. Nke a karịrị nke ọ bụla nke ndị ọzọ aka n'ezie ihe mere dị otú ahụ a dịgasị iche iche nke coffeemakers maka zuo taa.
Dị otú ahụ na a dịgasị iche iche nke caffeine ngwaọrụ, e nwere ihe ọzọ ọzọ n'ihi na kọfị gị-aṅụ ọha karịa mgbe ọ bụla. Main-iyi na-ewu ewu na uwe na-Manual na akpaghị aka Gakwuru, Live Espresso Percolator Kọfị na Cleaner. Onye ọ bụla n'ime ndị a ekwekọghị nwere ọtụtụ nanị ihe e ji mara ndị na-ekwe nkwa na-adọta a ụfọdụ ngalaba nke kọfị-aṅụ ọha.
Espresso Kọfị-Onye kere
The stovetop kọfị espresso brewers bu a ndu ụzọ maka akwadebe espresso caffeine mgbe ị na-adịghị ga-esi ihe ọkụ ọkọnọ nke ike ma ọ bụ ohere akpaka mbipụta. Nke a na-enyere aka ọ na-adị a zuru okè kọfị igwe na-n'èzí na angling ma ọ bụ backpacking nleta i kwesịrị ịdị mkpa ka na-emepụta ihe espresso ije. Ná mmalite mmiri na-enịm ke ọbụ ji esi mmiri ọkụ na mgbe na e nwere a cone nyo dị n'ime ọkụ wee jupụta na espresso ahịhịa. Ọzọ ndị kasị dị irè na-nwayọọ tightened na onye bụ ebe n'elu okpomọkụ akụ. Site okpomọkụ enye, mgbe n'elu ọkụ jupụtara na freshly brewed kọfị ọ na-ewepụ mgbe nwere otu di na nwunye nke nkeji na espresso na-akwadebe-awa. N'okpuru ebe ọzọ, ọ bụla okpomọkụ mma enweghị na-egosi caffeine nwere na-eje ozi ozugbo.
Akpaghị aka na Manual atasị Kọfị Machines
Kọfị onye kasị ewu ewu na ụdị ka bụ akpaka-atanye coffeemaker. The okirikiri nhọrọ ukwuu na dị oké mkpa bụ na o siri ike onyinye ma na-arụpụta. Tinye ọhụrụ mmiri maka wuru na-tank, Ịfanye a filtration n'ime bara uru nzacha njide, chọpụta gị họọrọ kọfị ihe ma jupụta na na nzacha ahụ inupụ mmalite mgba ọkụ. N'ime a nkeji ole na ole mmetụta gị na-ụtọ site senti nke freshly brewed caffeine na-ekpo ọkụ! Ọtụtụ aghụghọ nwekwara a wuru na-ngụ oge gbakwunyere a igbe milder idem otú ị pụrụ ịtọ gị espresso ka kọfị na-eme ka mgbe ọ bụla n'otu nke abalị ma ọ bụ n'ehihie, ma na-ejigide bụghị anọgide ajụkwa onwe.
Ozi ntapu kọfị igwe na-eme nwere ntakịrị ihe ịrụ n'ihi na ị na new mmiri iji ọzọ na-ekpo ọkụ iyi, ma mgbe na ọ bụ ihu ọma otu kọfị na-eme usoro maka na Java ihe n'ime iyo na-akwadebe mmiri ọkụ site na nzacha otú ahụ caffeine ọmụmụ-achịkọta n'ime igbe ma ọ bụ igbe dị n'okpuru. Otu ezigbo uru akpan owo nke obere akwukwo ikwafu kọfị igwe bụ eziokwu na ọ bụ ebe na i nwere ike inwe ọtụtụ ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụ na-enwe mmetụta na-enwe ọkụ eletrik na-eji mere na ọ bụ oké n'ihi maa ụlọikwuu na-ọzọ n'èzí nchụso.
Espresso Kọfị Onye kere
Java kọfị na-emepụta emewo ka a otutu ihe oké ọnụ na afọ na-adịbeghị anya na-eme ka nke a, ha na-emepe emepe n'etiti bukwanu kọfị ọrụ na-achọ ihe ọ bụla ọzọ karịrị nanị a ọkọlọtọ ije ije nabata. E nwere ugbu a dị iche iche nke espresso kọfị usoro ịhọrọ site na, na àjà ihe ọṅụṅụ akpaka na ya bụ ele mmadụ anya n'ihu akpaka. Ndị na-erughị gị nwere ike ime ka itiwapụ gị Java, dị ka a na-achị, ndị ọzọ na-akpaka Java emeputa bụ, ma n'ụzọ dị mwute na elu dị ọnụ ya bụ ịzụta. Dị ka ihe atụ, nke a semiautomatic nlereanya ike tamp kọfị ahịhịa, itiwapụ na caffeine, Ibu Ibu gị Iko na idaputa ochie ahịhịa, a kpam kpam akpaghị aka ngwaahịa nwekwara ike na-eme kọfị gị onwe gị aswell, na ibu akpaka espresso kọfị onye nwere ike ime nke niile dị n'elu Ọzọkwa nwere kwukwara e ji mara ndị dị otú ahụ dị ka ihe atụ wuru na-mmiri nzacha na n'ụlọ-ihicha.
Ndị a na-ugbu a na-aghọ nnọọ nkecha na-ewu ewu na-adịbeghị anya. Na-arụ ọrụ dị ka ntapu na akpaka igwe, ha Njirimara ike jiri prepackaged canisters nke ọpụrụiche coffees ka ime biya espresso bụ tọrọ ụtọ. Iji ọtụtụ reputable kọfị n'agbụ dị ka Starbucks now ere ha kacha ekpo ọkụ ugbu kọfị integrates na Live usoro, ahịa nwere ike inwe kpọmkwem n'otu akatabi okop ite nke pụrụ iche Java n'ụlọ nke ha na-aghaghị isi si na-azụ n'ihu na elu uru.
French Press Kọfị-Onye kere
Na-akpọ “pịa akụwa” ma ọ bụ ” plunger akụwa “, Pịa coffeemakers na-French dị ka pụrụ iche, mgbe ha nọ na n'oge gara aga. Ịhazi espresso ọzọ bụ na-arụ ọrụ karịa ka ọ ga a itinye ihe ọ bụla nke kọfị-eso ụzọ n'ihi na ọ bụ a obere akwukwo kọfị onye ama enyocha. The pan n'ezie a iko pipe nwere a, ntupu plunger na-eme otú ahụ dị ka ihe atụ a nzacha. Iji nyere aka ka kọfị kọfị ihe ga-ibido tụrụ site ị n'ime pan, ọzọ dejupụta fọrọ esi mmiri. The plunger ekemende enwe ala na ndị gasị onunu na-amanye n'ime na-eche Iko ma ọ bụ ite, mgbe ka Java ngwakọta ka nkpoda maka di na nwunye oge. Dị ka e nwere ọnụ ọgụgụ integral kpo oku na-akpata ma ọ bụ denture n'okpuru Java ngwugwu, ị arapara ya n'ime a ekpuchiri ekpuchi akpa iji nọgide na ya na-ekpo ọkụ n'ihi na e mesịa ma ọ bụ mkpa aka caffeine onunu ntabi.
Percolator Kọfị-Onye kere
Ozugbo percolator coffeemakers ndị na-ahụkarị ụdị kọfị brewers na ọtụtụ ebe obibi, a ọrụ ugbu a n'ihu si ntapu ngwaọrụ ndị na-akpaka. Ha o sina dị nweta ọnọdụ ha mgbe ọ bụla a kọfị-onye a chọrọ pụrụ ime ka nnukwu anatara nke Java ka megide 10-14 Iko ịgba ma ọ bụ obere mgbe ọ bụghị dị ka a maara nke ọma taa. Modern percolators pụrụ ịchọta ka kọmputa na stovu top ekwekọghị na a ga-eme ka dị ka akpaghị aka kọfị igwe na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na mmiri na-sie, kọfị Ndinam usoro dabeere na ịwa mmiri na-n'elu kọfị ihe, enịm ke nnọọ a metal nyo. Otu mwepu nke usoro bụ na espresso n'ozuzu ọkọkpọhi siri ike karị na ndị ọzọ ilu akatabi okop ogologo ọ na-aga site na-eke okirikiri.
Machine Kọfị-Onye kere
Eleghị anya, oddest nchọgharị ụdị kọfị-igwe ga-igwe kọfị igwe. Ịchọ si ọkà mmụta sayensị chepụtara video dị ka ihe, ngwaọrụ mejupụtara abụọ containers njikọ site n'ụzọ nke a siphon tubing. The filtration na nsogbu na ala akụkụ nke ite ahụ elu. Otu onye mbụ na-enye nke abụọ akpa na kọfị esemokwu, ọzọ cascades mmiri na belata akpa, ka ime biya espresso. Ebe mmiri na-ekemende sie ọzọ onye rụrụ a na-etinye na a na kwa agwụcha vepo bụ aka jikọtara site na tube na n'elu ite. Mgbe ihe 3 nkeji ite na-e si okpomọkụ ọkọnọ na ndị vepo condenses azụ na mmiri mmiri na-amanye site nzacha na azụ na ala nlereanya. Ndị ọhụrụ akpa nke Java ugbu a nọ ọdụ n'ime belata usoro. Ihe na-akpali obibia ka a-iko ma ọ bụ akpa nke Java!
Kwesịrị ịdị, kọfị enthusiasts nwere ike ịhọrọ site a sara mbara nhọrọ nke kọfị-eso ụzọ. Site stovu na bụ ọnụ ala n'elu espresso containers elu ọgwụgwụ ibu kọfị akụrụngwa na-akpaka, a kọfị ígwè bụ ihe ọ bụla mmefu ego nakwa dị ka onye ọ bụla na ihe ọ bụla ọchịchọ. Media na bụ ịtụnanya! Taa ebe a bụ na-ata ozi ọma. Ikekwe ịghọta ẹbọ abara gị uru bụ ezughị, na ọtụtụ Java igwe họrọ si taa. N'ime onye ọ bụla nke kọfị igwe ụdị mara n'elu na e nwere ọtụtụ dị iche iche ụdị na nsụgharị ịhọrọ site na.
Obi dị anyị ụtọ na Internet na-enye gị ihe n'ezie bara uru ma na ngwa ngwa ngwọta na-achọpụta ihe bụ ugbu inweta ihe price. Na obere oge na-enyocha ọ bụkwa na-apụtakarị ka ewepụkwa ihe unyi site na kọfị gị ụzọ na-kasị ukwuu. Nanị na-online ma na-eleta ọtụtụ kọfị onye inwale saịtị. Ya mere, ị kwesịrị ịtụle ihe ị na-atụle na-elezi anya, biko cheta na onye ọ bụla Java onye nwale saịtị na-emekarị bụ ndị dị iche iche.